श्रीमानको जब इच्छा हुन्छ तब अस्विकार गर्न सकिदैन ….. - Babal Khabar
November 20, 2021 by बबाल खबर
विश्वमा यस्ता कैयौ देशहरु छन, जो आफनो अनौठो–अनौठो कानुनलाई लिएर सधै चर्चामा आइरहन्छन् ।
यस्तै देशहरु मध्येको देश हो ईरान, जहाँ यस्तै–यस्तै अनौठा –अनौठा कानुन छ, जसको बारेमा जानेर मानिसहरु अचम्ममा पर्दछन् । यहाँ मानिसहरुलाई कैयौ प्रकारका प्रतिबन्धहरु लगाइएको छ, जसको बारेमा सायदै पनि तपाई जान्नुहुन्छ होला ।
– यहाँ महिलाहरुले टाइट पाइन्ट लगाउनु उपराधको श्रेणी मानिन्छ । साथै यहाँ यो पनि कानुन छ कि महिलाहरु आफनो श्रीमानले चाहेको बेला यौ ‘न सम्पर्क गर्नको लागी मनाही गर्न सक्दैनन् ।
– यहाँ पिता आफनो छोरीसँग पनि विवाह गर्न सक्छ । २०१३ मा ईरानमा यो कानुन पास भएको थियो, जस अन्तर्गत कुनै पनि पिता आफनो धर्मपुत्रीसँग विवाह गर्न सक्दछन् तर यसको लागी छोरीको उमेर कम्तिमा १३ बर्ष हुनुपर्दछ । ताजा खबर बाट साभार गरियको खबर ।
Prevप्रेमिकासँग ‘किस’ माग्दा ब्वाईफ्रेन्ड जेल सम्म पुग्नुपर्यो ! कसरी ? जान्नुस
nextश्रीमान् अरु महिलासँग नसल्किउन् भनेर महिलाले अपनाउन थाले यस्ता नयाँ तरिका